भीडभाड बढिरहे २२ जेठपछि निषेधाज्ञामा झन् कडाइ गर्छौ : प्रजिअ ललितपुर - Nepal Watch Nepal Watch
जेष्ठ १३, २०७८ बिहीबार
आजै रातिदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई कडाइकासाथ लागू गरिंदैछ । १६ वैशाखबाट सूरु भएको निषेधाज्ञालाई झण्डै एक महिनापछि झन् कडाइ गर्न लागिएपछि नागरिकमा भने त्रास छ । सरकारले घोषणा गरेरै १४ जेठकदेखि २१ जेठसम्म झन् कडाइ गर्ने सूचना जारी गर्दा एक हप्तासम्म खाद्यान्नका पसलसमेत खोल्न नपाइने भएको छ । सरकारले सूचना जारी गर्दै एक हप्तासम्म पुग्ने खाद्यान्नसहितका सामग्री जोहो गर्न सूचनासमेत जारी गरेको थियो । यसले पनि जनमानसमा एक किसिमको त्रास पैदा गरेको छ । यसै विषयमा ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलासँग नेपालवाचले गरेकाे कुराकानी :
झण्डै एक महिनादेखि जारी निषेधाज्ञापछि तपाईंहरुले झन् कडाइ गर्ने भएपछि जनतामा उल्टो डर पैदा भएको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले नागरिकलाई डर त्रास देखाउन निषेधाज्ञालाई कडाइ गर्ने निर्णय गरेका होइनौं । बढ्दो कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई छिट्टै मुक्त गराउन यो निर्णय लिइएको हो ।
आम रुपमा खाद्यान्नका पसलहरु बन्द भए पनि खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न अर्डर गरी प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा पनि छ । यसर्थ जिल्लामा निषेधाज्ञा हुँदा खाद्यान्न नपाइने त्रास लिइरहन जरुरी छैन ।
हामीले सूचना गरे अनुसार निषेधाज्ञा हुने हो । यसमा डर त्रास मान्नुपर्ने अवस्था होइन । मानिसहरुमा महामारी नफैलियोस् भनेर हामी कडाई गर्न बाध्य भएका हौं । हामी निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न लाग्छौं ।
भनेपछि निषेधाज्ञा यस अघिको जस्तो लचक हुँदैन ?
हो यसपटक हामीले कडाईकासाथ निर्णय कार्यान्वयन गराउने तयारी गरेका छौं । तर अत्यावश्यक सेवालाई रोक्ने भन्ने होइन । तर, साधारण र नियमित जस्तो अवस्था अहिलेको होइन ।
तर, तपाईंहरुले त खाद्यान्न पसलसमेत बन्द गर्न सूचित गर्दा नागरिकमा अत्यावश्यक सामग्री नपाइने डर र त्रास छ नी । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो महामारीमा नागरिकहरु सुरक्षित हुन् भनेर उठाइएको कदम हो । खाद्यान्नसहित अत्यावश्यक सामग्री किन्न हामीले दुई दिनको समय दिएकै हौं । केही दिनलाई पुग्ने सामग्री किनेर राख्दा सुरक्षित भइन्छ भने नागरिकले पनि अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन सहयोग नै गर्नुपर्छ । फेरि पनि आम रुपमा खाद्यान्नका पसलहरु बन्द भए पनि खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न अर्डर गरी प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा पनि छ । यसर्थ जिल्लामा निषेधाज्ञा हुँदा खाद्यान्न नपाइने त्रास लिइरहन जरुरी छैन ।
महामारी बढिरहने, किनमेलका नाममा भीडभाड बढिरहने हो भने २२ जेठपछि उस्तै परे अहिले घोषणा गरिएको भन्दा पनि कडा निषेधाज्ञामा जान हामी बाध्य हुन्छौं ।
पछिल्ला केही दिनयता काठमाडौं उपत्यकाममा संक्रमणको दर घटेर गइरहँदा तपाईंहरुले चाँहि निषेधाज्ञा झन् कडाइ गर्नुभयो नी ?
कोरोना महामारी झन् बढेर गयो । अस्पताल पूरै भरिए । मान्छे आतंकित हुन थाले । भीडभाड झन् बढ्न थाल्यो । यस्तो भएपछि बाध्यात्मक रुपमा निषेधाज्ञालाई झन् कडाई गरिएको हो ।
अहिलेलाई १४ देखि २१ जेठसम्म कडाई गर्ने तपाईंहरुको निर्णय छ । त्यसपछि पनि थपिन्छ की एक हप्तापछि निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुन्छ ?
यो भनिरहनुपर्ने विषय होइन । महामारी बढिरहने, किनमेलका नाममा भीडभाड बढिरहने हो भने २२ जेठपछि उस्तै परे अहिले घोषणा गरिएको भन्दा पनि कडा निषेधाज्ञामा जान हामी बाध्य हुन्छौं । हामी अहिलेसम्म चुप लागेको कोरोना कम भएर जान्छ की भनेर हो । तर कम नभएपछि निषेधाज्ञालाई कडाई गर्नु हाम्रो बाध्यता हो ।
तपाईंहरुले जारी गरेको पछिल्लो निर्णयलाई नागरिकहरुले लकडाउनभन्दा पनि कडाई हुने रुपमा बुझेका छन् नी ?
लकडाउन भनेको आम रुपमा बन्द हो । मान्छेहरुलाई हिड्डुल गर्नै नदिने भन्ने हो । तर निषेधाज्ञा ठाउँ विशेषमा हुने हो । तोकिएकोबाहेकको अवस्थामा नागरिकहरुलाई लकडाउनमा जस्तो कडाइ गरिंदैन ।
अष्ट्राजेनिका खोप नेपाल पठाउन प्रयास गरिरहेको छु : राजदूत खतिवडा [अन्तर्वार्ता]
कोभिड उपचारका लागि सबै सरकारी अस्पतालमा भीआइपीका लागि कोटा छुट्याइएको छ : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री [अन्तर्वार्ता]